Ukufudumala kwembulunga yonke akuzange kumile kusuka ngo-1998 kuya ku-2012 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala kwembulunga yonke akuzange kume kusukela ngo-1998 kuya ku-2012, isifundo sithola
Ngokuya ngocwaningo olusha olushicilelwe ephephandabeni i-'Nature Climate Change ', ukuntuleka kwemininingwane emazingeni okushisa e-Arctic kudale ukwehla okubonakalayo kokushisa komhlaba phakathi kuka-1998 no-2012. Ososayensi abavela e-University of Alaska Faibanks (UAF), kanye nabanye ochwepheshe abavela eChina, bakhe indawo yokuqala yezinga lokushisa komhlaba.
Ngokwenza njalo bakutholile lokho izinga lokufudumala kwembulunga yonke beliqhubekile nokukhuphuka ngo-0,112 degrees Celsius ngeminyaka eyishumi esikhundleni sokwehla kube ama-degree ayi-0,05 ngeshumi leminyaka ngaleyo nkathi, njengoba kucatshangwa ngaphambili.
Ithimba lososayensi libala kabusha amazinga okushisa omhlaba aphakathi kuka-1998 no-2012 nalokho abakutholile kwakumangalisa ngempela: i-Arctic ifudumele kakhulu ukwedlula yonke enye iplanethi ngokwesilinganiso. "Silinganisela izinga elisha lokufudumala komhlaba e-Arctic ngo-0,659 degrees Celsius eminyakeni eyishumi kuleso sikhathi." Ucwaningo lwangaphambilini lwaluphethe ukuthi ukufudumala bekungu-0,130 degrees ngeminyaka eyishumi. Bekuvele kwaziwa ukuthi yindawo ebucayi kakhulu, kepha lo mbiko omusha usikhombisa ukuthi isimo sangempela sibi kakhulu.
Iningi lezilinganiso zamanje zisebenzisa idatha yomhlaba emele isikhathi eside, kepha i-Arctic ayinayo inethiwekhi yethuluzi eqinile yokuqoqa idatha yokushisa. Ngakho-ke, abacwaningi bathembele kwimininingwane eqoqwe yi-International Arctic Buoy Programme e-University of Washington (United States), balungisa namazinga okushisa asolwandle avela e-United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). ngemininingwane yomhlaba.
I-Arctic ihlala, futhi manje kunanini ngaphambili, indawo abacwaningi okufanele baqhubeke ukuyifunda, ngoba uma kwakukholakala ukuthi ayinkulu ngokwanele ukuba nomthelela emazingeni okushisa aphakathi komhlaba, ngokusho kososayensi womkhathi uXiangdong Zhang, we Isikhungo Sokucwaninga se-UAF International, i-Arctic »kuyingxenye edingekayo yesibalo futhi impendulo isithinta sonke".
Ukuze ufunde kabanzi, chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukufudumala kwembulunga yonke akuzange kume kusukela ngo-1998 kuya ku-2012, isifundo sithola
Ukuhlangana kwamabhere we-polar angama-200 kuxwayisa ngokushintsha kwesimo sezulu
I-VIDEO: INASA isikhombisa ukuthi isizini yeziphepho yango-2017 yayinjani